Dr. Dinbandhu Sharma | Nepali Stories
Dr. Dinbandhu Sharma
Dr. Dinbandhu Sharma – Tama
डा. दिनबन्धु शर्मा – तामा
(मधुपर्क २०६६ चैत)
मुडुलो बाच्छो ओसेपिलो कान्लाबाट घाँसका बुजा निकालिरहेको छ । पुच्छर डोलाउनसम्म बिर्सेर गाडिएको गाडिएकै छ ।
‘यस्तो घाँस त यो कान्लामा ठामठामै रैछ’, नन्दुको अगाडि खुर्पा लिएर उभिएको दाजुचाहिँले बाच्छोलाई हेरेकै उभिएर भन्यो । बाँसको झ्याङमुनि आइपुग्दा अहिले घाम अस्ताइसकेको छ ।
‘चिसो छ, माटे लाग्छ कहिले त वस्तुलाई यस्तो घाँसले,’ बोकेको बाक्लो झार सिरुको बीचबीचमा गुथ्थगुथ्थ परेको रहेछ । तल कान्लामुनि सानो पानी ठाउँठाउँ लुक्तै र निक्लँदै तलपट्ट िचिसो बग्दै गएको हरियो सितलो छ ।
‘यो कर्कलो हो ?’ बादलको पहेँलो आएर छपक्कै टाँसिएको पाखामा ठूलाठूला पात हुने घाँस जस्तोलाई देखाएर नन्दुले सोध्यो । आफ्नो दाजुको आधा ढाडभन्दा माथिसम्म अग्लो भएर नन्दु छायाँझैँ हिँडेको देखिन्छ । पुक्क गालाको माझमा सानो बाटुलो नाकमाथि गोलो निधार अलिकति बलैले खुम्च्याएर दाजुलाई र घाँसलाई पालैपालो हेरिरहेको छ ।
”हुन्छ, कर्कलो …, गबदो हो गबदो, चिन्दैनस् गबदो र कर्कलो पनि ?” दाजुले भन्यो । ऊ बाँसका घारीमा छेउछेवै भएर लहरै उठेका विभिन्न आकार र उचाइका तामाहरू गनिरहेको थियो ।
“लौ हेर, बेलैमा यही कान्लाको माटो खसालेर पुरिदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो ? तामाको गति …,” गाँजबाट उछिट्टएिर बाहिरैसम्म जरा देखाएर निक्लेको मसिनो तामा देखाएर उसले भन्यो – “वैशाख नलाग्दै गर्नुपर्छ तामा पुर्ने काम ।”
“आज काट्ने कुनचाहिं ?” बहिनी पनि आएर कान्लामाथि नै उभ्भिसकेकी रहिछे । अरू तीन-चारजना केटाकेटीहरू उसैसँग उभिएका थिए ।
पल्लो कान्लामा रहेकी ठूलापाटेकी छोरी पनि पाठाहरूलाई पेटारे माउको पछि छोडिदिएर त्यहीँ आइपुगी ।
“तिम्रोमा तामा खाएँ ः” बहिनीले सोधी ।
त्यसले मुन्टो हल्लाई र अलिकति सम्झनाको उज्यालो आँखामा आइसकेपछि भनी – “बा छँदा त कत्ति खाइन्थ्यो ।”
“हाम्रो त हिजो खाइसकियो … कत्ति ठूलो थियो हगि,” सुब्बाको छोरोले छेउमा उभिएकी आफ्नी बहिनीसँग समर्थन मागेर भन्यो ।
दाजुचाहिँ बाँसको घारी घुमेर वरिपरि अझै जोख्तै थियो । सुब्बाको छोरोसम्मले तामा खाएको सम्बन्धमा गरेको फाइँफुइँले उसलाई फेरि रिस उठ्लाजस्तो भएको थियो । हिजो बेलुका उठेर बल्लतल्ल थामिन खोजेको रिसलाई फेरि उसले जिस्क्याइदिएको थियो । हिजो बेलुका बरु त्यो सुब्बाले बलेनी जोडिएको घरमा तामा काटेर पठाउँदै नपठाएको भए केही थिएन । हेपेरै हो त्यसले, त्यति सानो जर्कटो मात्र पठाएर नबिच्काइदिएको भए उसलाई यो साल तर्कारीको निम्ति तामा काटुँला थिएन । बेलुका भाइबहिनीहरूले गर्नु गरे ।
“हाम्रोमा तामा काट्नु हुँदैन ?”
“हाम्रो पनि कत्ति तामा छ नि हगि ः”
राति अबेरसम्म कचकच गरे तिनीहरूले ।
“ल, भैगो भोलि काटिदे ठूला, यो सुब्बाको चिहानले हेपेको तेरा भाइबहिनीलाईसम्म सहन गाह्रंो भएको छ,” आमाले राति भनिन् – “ल अहिले सुत, कत्ति कचकच गरेको दाजुलाई ।”
घरको आँगनसम्म पहेँलो साँझ छापिइसकेको थियो । दाजुचाहिँ तामा भुत्ल्याएर सकिरहेको देखियो । वरिपरि झु/mम्म भएर घेरिरहेका केटाकेटीहरूको बीचमा ऊ पसिना काढिरहेको रहेछ । घैयापाटे माइलीका छोराछोरीहरू, सुब्बाका छोराछोरीहरू र धन्सार्नीको परिवारै उल्टेर तामाको वरिपरि भुम्मिरहेका थिए ।
“छि, कति गाँडाघेर लागेका, खसी नै ढलाएको त होइन, केही नदेखेको यो मुलुक,” आमा फतफताउँदै भित्र भान्सासम्म पुगिन् । फेरि लगत्तै निक्लेर भनिन् – “यी केटाकेटीलाई त्यसैत्यसै चाड आएजस्तो हुने किन होला ?”
“के हो ? तामा काटेको ? हो त रै छ नि,” घाँसको भारी लिएर उकालिँदै गरेकी आँटीघरे भाउजूले भनिन् – “हाम्लाई पनि एक टुक्रा दिए कस्तो हुन्थ्यो ।”
“तिमीहरूको नयाँ बारीमा कस्तो सप्रेको तामा,” उकालो लागिसकेकी भाउजूले सुन्ने गरी आमैले फेरि भनिन् – “जिरो पठाएको छ दुलही लाहुरेले ?”
“नयाँ बारीमा त छ नि बज्यै, बूढाले छुन दिने होइन तामा ।”
“जुगजुगसम्म घाँस काटेर गाईवस्तु पाल्ने बाँस एकछाक तर्कारी” भनेर काट्न गाह्रै हुन्छ नि जेठी । यहाँ त तेरा ससुरालाई तर्कारी नै सबभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ र पो । यति खेर त पल्लोघरमा काटेको देखेपछि भुराहरूले सुख्खै दिएनन्, काटिदे भनेँं ।”
“अलि उता सर न” नन्दुचाहिँ अरूलाई परपर घचेटेर दाजुकै पछाडि उभिन आइपुगेको थियो । छातीदेखि आँखासम्म आएको खुसीले उज्यालो भएर ऊ बडो गौरवपूर्वक आफ्ना दौँतरीहरूको माझमा उभिएकोमा आमालाई खुसी लाग्यो ।
“कत्ति ठूलो – कत्ति सेतो हगि ?” नन्दुले साथीहरूतिर फर्केर भन्यो ।
“हाम्रो पनि हिजो है ?” सुब्बाको छोरोले भन्यो ।
“भो, योभन्दा त सानै थियो ।”
“तैँले भनेर हुन्छ ?”
“हुन्छ नि, तैँले भनेर हुन्छ ?” नन्दुले जङ्गएिर अलिकति घचेडिदियो ।
“ए, बदमासहरू,” दाजुचाहिँ गिंड-गिंड पारेर टुक्र्याउँदै गरेको तामा छोडेर उनीहरूतिर फक्र्यो ।
आमाले पिँढीबाटै कराएर भनिन् – “जर्रो भएको छुट्टै राख, अमिल्याएर झोल खानुपर्छ, अहिले खानलाई कलिलो ठिक्क पार ।”
“अनि जिरा रै छ त आमा ?” नन्दुको दाजुले सोध्यो । ऊ चुलाको डिलमुनि गहिरो ओछ्यानमा नन्दु र बहिनीलाई राखेर तामाको प्रसङ्ग भएको कथा सुनाइरहेको थियो ।
“कसरी हुनु, त्यही आँटीघरे जेठीले अलिकति दिएर गई, तामाको टुक्रो भनेर आएकी थिई । फलेबास जाने कोही भए किन्न पठा अलिकति । अलिकति गिंड राखिदे जेठीलाई पनि ।”
क्रमश ः तामाको मसालेदार बास्ना घरभरि फैलियो ।
नन्दु एकपटक बाहिर निस्क्यो र आँगन छेउसम्म पुग्यो । हाँडीकोटको कालो पहाडमा बाहेक केवैदेखि फुर्केसल्ला हुँदै अझै पर लम्पेकसम्म बाक्लै मलिन बत्तीहरू देखिए । आकाशमा पनि ताराहरू अग्घोरै बाक्लो गरी टाँसिएका थिए र अन्धकारमय रातमा मलिनो उज्यालो पठाइरहेका थिए । आँप र नासपातीको रूख भए ठाउँमा कालो अँध्यारो बाक्लिएको थियो ।
“को हो ?” अँध्यारो बाटोमा कालो छायाँले बोलेको सुनियो ।
“बा आउनुभएको हो ?” नन्दुले सोध्यो ।
“अँ ….., तँ किन बाहिर – यस्तो अँध्यारोमा ?”
“म तपाईंलाई नै हेरिरहेको थिएँ, थाहा छ तपाईंलाई ? आज तामा काटेको छ ।”
“हो ? ल, खासा भयो ।”
आँटीमुनि नन्दु र उसकी बहिनी आमने-सामने बसेर खाइरहेका थिए । चुलोमा बा र दाजुचाहिँ खाँदै थिए । तामाको झोलसँग भात सप्काएको आवाज र तामाको मीठो बास्ना घरभरि छपक्क थियो । ठूलीभाउजू अँगेनामा सानो आगो बालेर काखको नानीलाई सेकिरहेकी थिइन् ।
“मरिचको के कुरा, बेसारसम्म माग्नुपर्‍यो,” आमाले भनिन् ।
“मरिच भएको भए अझ स्वादिलो हुन्थ्यो ।”
“मीठो हुन्छ हगि तामा ? कस्तो पीरो, कत्ति पीरो,” नन्दुले बहिनीतिर फर्केर भन्यो ।
“कत्ति पीरो छ,” बहिनी रुनै थाली । तिनीहरू हाउहाउ गरिरहेका थिए ।
“ए दुलही, पानी देऊ त, नानीहरूलाई, पीरो पनि नराखेर कसरी पकाउनु फेरि ?” आमाले भनिन् ।
नन्दुलाई जिब्रो र ओठ सप्पै तातो र पीरोले खुल्किएर गएजस्तो लाग्यो । सबै शरीरदेखि टाउकोसम्म तातेर ज्वरो आइरहेको थियो र पसिनाको भल बगिरहेको थियो । जिब्रो त माझ ढाडबाट काटिएरै खसिसकेको जस्तो लागेको थियो र तालु सुकिरहेको थियो तर तामा काटिएर खाइसकिएकोमा खुसी नहुनु सम्भव थिएन ।
“आजको तामा मीठो भो,” दाजुले भन्यो ।
भन्नुपर्छ लागेको, सबैले भनेको, नन्दुले पनि भन्यो – “तामा त मीठो छ ।”
“तामा ठिक्क काट्ने बेलाको रै छ,” बाबुले भने ।
“जिराको पनि कुरा हो,” आमाले भनिन्, “लाहुरेले पठाएको मीठो हुन्छ, काँचो जिरा, जत्ति नयाँ भो त्यति मीठो हुने त हो नि ।”
“ल पानी खानु त, हेर त आँसु बलिन्द्र धारा,” भाउजूले बहिनीको हातमा अम्खरा दिएर भनिन् ।
भोलिपल्ट गाईका बाच्छा खेदेर वनमा पुग्दा सुब्बाको छोरोसँग नन्दुले भन्यो – “हिजो तामा खुब मीठो भएछ, मैले त कत्ति खाएको ।”
बहिनीले पनि भनी – “मद्रासी जिरा हालेको थियो – काँचो जिरा, जिरा जत्ति नयाँ हुन्छ, त्यत्ति मीठो हुने त हो नि ।” अहिले उसको अनुहार आफ्नी आमाको जस्तो देखियो ।
गाईहरू लहरै मइरेको डाँडो घुमेर उपल्लो कुलासम्म ओर्लिसकेका थिए ।
बहिनीचाहिँलाई त्यसपछि दिनभर पनि लागिरहृयो – “मीठो भनेको के हो ?” उसका हिजो तामा काट्ने बेलादेखिका सबै हर्कहरू सेलाइसकेका थिए तर पनि एउटा गौरव अझै उसको अनुहारमा थियो- तामा खाइएको गौरव ।
Posted in Dr. Dinbandhu Sharma
Tagged Dr. Dinbandhu Sharma - Tama Dr. Dinbandhu Sharma's Nepali Story Tama Literary work of Nepali Story Writer Dr. Dinbandhu Sharma Literatures of Nepali Story Writer Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Author Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Katha Nepali Katha Tama by Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Kathakar Nepali Kathakar Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Rachanakar Kathakar Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Tama by Dr. Dinbandhu Sharma Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Dr. Dinbandhu Sharma Sahityakar Dr. Dinbandhu Sharma Ka Nepali Katha Haru